सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने र पुरुष समलिङ्गीहरुमा एचआइभी संक्रमणको दर उच्च – Samabeshi Khabar
सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने र पुरुष समलिङ्गीहरुमा एचआइभी संक्रमणको दर उच्च
१५ मंसिर २०७७, सोमबार १७:४६ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, १५ मंसिर (ससं) । नेपालमा सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने र पुरुष समलिङ्गीहरुमा एचआईभी संक्रमणको दर उच्च रहेको बताइएको छ । ३३ औं विश्व एड्स दिवसको अवसरमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्ने, यौनकमी, पुरुष समलिङ्गीहरु तथा तेस्रो लिङ्गीहरु, रोजगारीका लागि विदेशिनेहरु र जेलका कैदीहरु रहेको बताइन् । उनका अनुसार जोखिममा रहेका अन्य समूहमध्ये सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरु र पुरुष समलिङ्गीहरुमा एचआइभी संक्रमणको दर उच्च रहेको छ । तर, पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन फैलदै गएको कोरोना महामारीले एचआईभी संक्रमितहरुलाई खासै प्रभाव नपार्ने निर्देशक डा. देवकोटाले जानकारी दिइन् । नियमित औषधि प्रयोग गर्नेहरुलाई कोरोना संक्रमण भइगए पनि खासै आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै नेपालमा भएका कुल एचआईभी संक्रमितमध्ये असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट ८० प्रतिशतलाई संक्रमण सरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा देखिएका एचाईभी संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशतलाई असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट संक्रमण सर्ने गरेको हो ।
त्यसैगरी गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा भएका कुल एचआईभी संक्रमिमध्ये १९ हजार ४१० जना एआरभी उपचारमा छन् । यो कुल संक्रमितको ६६ प्रतिशत हो । हाल नेपालमा कुल एचआईभी संक्रमितको संख्या २९ हजार ५०३ जना रहेको केन्दको अनुमान छ । पछिल्लो समयमा एचआईभी संक्रमितको संख्या घट्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार सन् २०१० को तुलनामा सन् २०१९ सम्ममा नेपालमा नयाँ संक्रमण ६४ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै बच्चाहरुमा पनि ८५ प्रतिशतले नयाँ संक्रमणमा कमी आएको केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालमा हाल एचआईभी संक्रमितहरुलाई ८० वटा ए.आर.टी. केन्द्हरु र २० वटा ए.आर.भी. औषधि वितरण केन्द्रहरुबाट निःशूल्क औषधि वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै देशभर १८५ एचआइभी परामर्श तथा परिक्षण केन्द्रहरुबाट निःशुल्क रुपमा एचआईभी परामर्श तथा परिक्षण कार्य भइरहेको केन्दले जनाएको छ ।